Tsy azo lavina, amin’ny maha-protestanta antsika, ny maha-zava-dehibe ny fampianarana Soratra Masina, ary fampianarana miainga amin’ny loharano madio mangalahala dia ny Baiboly izany. Ny mpanitsy fivavahana dia nametraka ho isan’ny foto-pinoana protestanta ny hoe “SOLA SCRIPTURA” na ny “SORATRA MASINA DIA NY SORATRA MASINA IRERY IHANY”. Noho izany ary, dia hisy fampianarana mitohy momba ny foto-kevitra ara-tSoratra Masina eto amin’ny site-antsika ary anombohana izany dia fanadihadiana mahakasika ny anjely.
Ny teny ilazàna ny “anjely" ao amin’ny Baiboly dia MALAK amin’ny teny hebreo ary AGGELOS (vakiana hoe “angelos” amin’ny teny grika). Ny hevitr’ireo teny ireo dia iray ihany: IRAKA. Ny anaran’ny boky MALAKIA araka izany dia IRAKO (Mon Messager)no heviny.
Zava-boahary ara-panahy, izay manana saina sy fahendrena ambony. Na dia izany aza, mety hitan’ny mason’olombelona izy, raha ilaina izany amin’ny iraka ampanaovina azy. Ny anjejy dia fanahy nefa afaka maka ny endrik’olona izy. Betsaka ny ohatra azo raisina ao amin’ny Soratra Masina: Genesisy 19:1; Mpitsara 6:11; Jaona 20:12; Asan'ny Apostôly 12:7. Misy aza anjely tonga mivahiny ao an-trano saingy tsy fantatra izany (Heb 13:2). Ny tenin’ny anjely dia mety ho haintsika olombelona noho ny asan’ny Fanahy Masina.
Fiandrianana (Kol 1:16)
Fanapahana (Ef 1:21; Kol 1:16)
Fahefàna (Ef 1:21; Kol 1:16 I Pet 3:22)
Ny Serafima (Isaia 6:2):
Ny heviny dia hoe “mirehitra, mivaivay ”Midera an’Andriamanitra sy ny fahatsaràny rehetra no asany. Ilain’Andriamanitra ihany koa izy ireo hanadio sy hamafa ny heloky ny olo-masina. Manana elatra enina izy ireo, ny roa manarona ny tavany, ny roa manarona ny tongony ary ny roa anidinany. Mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy ireo (Is 6:1-8)
Izay resahina matetika ao amin’ny Soratra Masina (Genesisy 3:24: II Samoela 22:1: Ezekiela 10:1: Hebreo 9:5): manana tanana, tongotra ary elatra izy ireo. Mahavariana ny fitantaran’I Ezekiela azy ao amin’ny toko faha-10. Mitarehin’olona izy ireo, ary efatra ny tavany ary efatra ihany koa ny elany. Ny bokin’ny Genesisy dia mampiseho fa niambina ny zaridaina tao Edena ny Kerobima (Genesisy 3:24). Teo ambonin’ny fiaran’ny Fanekena koa izy, mariky ny hery sy ny fahamasinan’Andriamanitra (Eksodosy 25: 17-21).
Ny bokin’ny Salamo ihany koa dia mamaritra ny toeran’izy ireo eo akaikin’Andriamanitra (Salamo 18:10). Tafika iray amanontolo mihitsy arak’izany no manandratra ny voninahitr’Andriamanitra, sady mamita iraka ety ambonin’ny tany (Salamo 103:20).
Voaporofo ihany koa, araka ny nofin’I Jakoba fa mampifandray ny lanitra sy ny tany, mivezivezy miakatra sy midina ny anjely (Genesisy 28:12).
Arikanjely (I Tesaloniana 4:16: Joda 1:9)
Mikaela izay Arikanjely (7). Izy no Filoha na Komadin’ny tafiky ny lanitra. Ny hevitry ny anarany dia hoe:”toa an’Andriamanitra”. Izy no niady tamin’I Satàna (Apôkalipsy 12:7).
Gabriela (Dan 8:16: Dan 9:21; Lk 1:19-26).
Ny anarana hoe Gabriela dia “mahery Andriamanitra”. Ny asany dia ny mitondra ny Tenin’Andriamanitra na ny hafatra ho an’ny olona tian’Andriamanitra hiantefan’izany, toa an’I Maria ao amin’ny Lioka 1:28-38.
Nampahery ihany koa an’I Daniela ny anjely Gabriela, rehefa napahafantatra azy ny fahotan’ny zanak’olombelona (Dan 8:15-19). Niverina indray koa izy niteny sy nampianatra fahendrena, izany hoe ny fahalalàna an’Andriamanitra (Dan 9: 20-23).
II. ASAN’NY ANJELY
Manana hery tsy hay tohaina izy ireny (Salamo 103:20). Miditra an-tsehatra izy hahatanteraka ny fitsaran’Andriamanitra (Sodoma, Jerosalema, Ny Asyriana, Heroda). Afaka mivezivezy eran’izao tontolo izao izy ireny hanara-maso azy (Zak 8: 1-9).
Manompo an’I Jesosy sy mankalaza Azy ihany koa izy ireo (Mat 4:11; Mat 13:41; Mat 25:31; Mat 26:53; Lk 3:13; Lk 22:43; Heb 1:6: Ap 23:16).
Mahery sy matanjaka (II Pet 2:11)
Be voninahitra sy masina (Lio 9:26)
Tsy mety maty (Lio 20:36)
Sady tsy lahy no tsy vavy (Mat 22:30)
Fanahy izay ampiasain’Andriamanitra (Heb 1:14)
Mifaly ny amin’ny famonjena fanahy (Lio 15:10)
Afaka mahita ny tavan’Andriamanitra (Mat 18:20) fa isika kosa tsy mahazo mahita izany (Eks 33:20)